နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Window 8 အသံထွက်လာ
Window 8 အသံထွက်လာ
ကျွန်တော်တို့ Windows7အကြောင်း OS လောကမှာ အပြောများနေတုန်းမှာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ဝေဖန်နေတုန်းမှာဘဲ Windows 8 ဆိုပြီ သတင်းထွက်လာပါပြီ။ ဒါပေးမဲ့ သတင်း အဆင့်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၁၂ မှာမှ ထွက်ရှိလာမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အခု လက်ရှိ Windows7မှာတော့ 32/64/86 Bit ဆိုပြီ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ ဒါပေးမဲ့ Windows 8 မှာတော့ 128 Bit အထိအသုံးပြုလို့ရအောင် ပြုလုပ်မယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Microsoft ရဲ့ Windows များထွက်ရှိမှုကိုနိူင်းယှဉ်လို့ ရအောင်နှင့် ဗဟုသုတအားဖြင့် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by P Kyaw Swa at 3:22 PM
Gtalk ကနေ လူတွေ အများကြီးနဲ့ Conference ပြောကြရအော...
G-Talk ကနေ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသီချင်းတောင်းဆို နား...
Computer Screen Filter လေးသုံးကြည့်ရအောင်
Autocad 2010 (မြန်မာလို)
USB စတစ်လေးအတွက် ဒုတိယမြောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံး။
Creating Gtalk Bot
Quick Format နှင့် Regular Formatအကြောင်း..သိကောင်...
ကင်မရာမလိုပဲ vedio ရိုက်ပြီးစာသင်ချင်သူတွေအတွက်
Admin Accounts အကြောင်းသိကောင်းစရာ
USB-Universal Serial Bus အကြောင်းသိကောင်းစရာ
ကွန်ပျူတာ Bus အကြောင်း
IDevices use asawifi- Hotspot (ipad,iphone,ipod)...
IDM all version keygens & patch only!!!! လိုချင်ရင...
Office 2007 ကို 2003 မှာ လွယ်ကူစွာ ဖွင့်မယ်..........
Picasa 3.6 အသုံးဝင်မှု........
Defragment လုပ်ဖို့ လိုတယ်........
Window7မှ ပြဿနာအချို့
Firefox add-ons လေးတွေသုံးကြည့်စေချင်.........
Run ကနေတဆင့် သွားလို.ရတဲ နေရာတွေ
Youtube, Metacafe တို့ကို ကျော်ဝင်ပြီးကြည့်ရအောင်
Youtube,Facebook တို့မှ Download ချရန် အဆင်ပြေတဲ့ ...
မည်သည့် software နှင့် add-on မပါပဲ Youtube မှ Dow...
FireFox ကနေ Gtalk ချက်ကြရအောင်
win font ကိုသုံး ပွီး database ထဲထညျ့ရငျ win font အတိုငျးဝငျအောငျလုပျလို့ရသလားခငျဗြ